September 14, 2020 5 min read By wardeeq news Reporter
Jakarta, Indonesia – Adang wuxuu qubuuro ka ahaa caasimada Indonesia mudo lix sano ah – laakiin waligiis shaqo adag umuu qaban.
Kahor intaan cudurka faafa ee coronavirus uusan dhicin in ka badan lix bilood ka hor, wuxuu ku aasi lahaa seddex ilaa afar meyd maalintii qabuuraha Jondada ee Pondok Rangon. Hadda, waa in ka badan 25.
“Waxaan aasnay ​​dad aad u tiro badan,” ayuu yiri. Waan daalnay.
Indooniisiya waa waddanka ugu daran ee ku dhaca Koonfur-bari Aasiya marka la eego dhimashada la xaqiijiyey, iyada oo ilaa hadda la diiwaan geliyey in ka badan 8,000 oo dhimasho ah.
Markay tiradu sii kordheyso, qabuuraha Pondok Rangon ayaa si xawli ah u buuxsamaya mas’uuliyiintuna waxay filayaan inay gaarto awood buuxda bisha soo socota haddii sida hadda taagan ay sii socdaan.
Bishii Juun, mas’uuliyiinta Jakarta waxay bilaabeen inay yareeyaan xayiraadaha lagu soo rogay bishii Abriil, taasoo u oggolaatay ganacsiyada badan, makhaayadaha iyo xafiisyada inay dib u furmaan. Laakiin seddex bilood ka dib – iyadoo dhakhaatiirtu ka digeen in nidaamka daryeelka caafimaad uu qarka u saaran yahay inuu burburo – gudoomiyaha gobolka Jakarta ayaa sheegay in la joogo waqtigii dib loo soo celin lahaa qeyb ka mid ah xiritaanka.
“Tani waa xaalad deg deg ah, oo ka deg deg badan tii bilowga cudurka,” Anies Baswedan ayaa yiri Arbacadii, isaga oo intaa ku daray in 10 milyan ee magaalada ay tahay inay mar kale ka shaqeeyaan, wax ku bartaan kuna tukadaan guryahooda.
Carruurta Indooniisiya oo halista ugu jirta maaddaama COVD-19 ay carqaladeyneyso tallaallada tallaalka (2:36)
Xayiraadaha la dhaqan galiyay laga bilaabo Isniinta waxay la mid yihiin wixii lagu soo rogay horraantii sanadka: gaadiidka dadweynaha waa xaddidan yahay, makhaayadaha ayaa kaliya ka adeegi kara meesha laga baxo, xafiisyo badanna waa la xiray ama waxay leeyihiin xaddiddo awood.
Baswedan wuxuu yiri qolalka go’doominta iyo qeybaha daryeelka degdegga ah ee isbitaalada gudbinta ee COVID-19 ayaa qiyaastii 80-boqolkiiba degan – sariirahana way dhammaanayaan toddobaadyo haddii magaaladu ku sii socoto isla wadadaas.
“Tani waxay ku saabsan tahay badbaadinta dadka Jakarta. Haddii aan u oggolaanno inay tani sii socoto – isbitaallada ma awoodi doonaan inay xakameeyaan xaaladda, natiijaduna waxay noqon doontaa heer dhimasho sare,” ayuu yiri.
Dhakhaatiirtu waxay ka baqaan waxa ugu xun
Dhakhaatiirta Jakarta ayaa soo dhoweeyay talaabadan, laakiin qaar badan ayaa dareensan in xanibaada aysan aheyn in marka horeba la dabciyo.
“Waxaan dareemeynaa in xaaladdu ay noqotey mid cabsi leh. Tirada kiisaska ayaa sii kordheysa maalinba maalinta ka dambeysa mana muuqato isbeddel lagu muujinayo hoos u dhac,” ayay tiri Dr Erlina Burhan, oo ka tirsan Isbitaalka Pesabatan.
Iyo, sida xabaal-wadeenada, shaqaalaha caafimaadka ee caasimada waxay dhahaan way shaqeeyaan oo wey daalan yihiin.
“Waxay u egtahay maaratoon laga bilaabo Maarso – ma jiro nasasho,” ayuu yiri Burhan. “Qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa durbaba sheegaya inay daalan yihiin oo ay ku daaleen waxaas.”
Ilaa maanta, Indonesia waxay diiwaan galisay 221,000 kiis oo la xaqiijiyay oo ah coronavirus.
Burhaan wuxuu yiri hadii cudurada sii kordhayaan, dhaqaatiirta isbitaalkeeda waxay ku qasbanaan doonaan “inay ilaahay ciyaaraan” ayna go’aamiyaan cida daaweyneysa iyo cida ka jeedsata.
“Waxaan ka baqayaa xaalada aanan caawin karin qof walba oo u baahan caawinaad. Waxaan ka baqeynaa in nalaga badiyo.”
Ugu yaraan 200 oo shaqaale caafimaad ah ayaa ku dhintey COVID-19 gudaha Indonesia, oo ah waddan nidaamka daryeelka caafimaad uu horeyba u ahaa shaqaale hoose isla markaana aan la liidan ka hor faafida.
Dr Shandy, Jakarta
Dr Shandy Shanaya [Al Jazeera]
Isbitaalka Pertamina, oo ah xarun kale oo loogu tala galay daaweynta COVID-19, Dr Shandy Shanaya wuxuu sheegay inuu shaqo tagayo isagoo naftiisa u baqaya.
Kaliya uma arki karno inay tahay lambar kale. Marka xirfadle caafimaad uu dhinto, ka fikir dhammaan dadka ka lumay helitaanka daryeel caafimaad, ayuu yiri 26 jirka.
“Waxaan isku daynay inaan si deg deg ah u furno. Waxaan furey magaalada ka hor intaan arintu hoos u dhicin,” ayuu raaciyay.
Dadka dakhligoodu hooseeyo way dhibtoodaan
Laakiin waddan kala jaad ah oo dad badan leh sida Indonesia, oo ay ku nool yihiin qiyaastii 270 milyan oo qof, ma jirto xal fudud oo laga gaaro dadaallada looga hortagayo dillaaca cusub iyo soo celinta nolosha.
Jakarta, wareeg kale oo xayiraad ah ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysato la dagaallanka faafitaanka fayraska laakiin sidoo kale waxay ka dhigeysaa nolosha dadka saboolka ah ee deggan xitaa dhib badan.
Indonesia: Tallaalka Shiinaha waa in la tijaabiyaa iyadoo kiisaska COVID-19 ay kordhayaan (2: 31)
Soo noqoshada xiritaanka waxay ka tagi doontaa shaqaale badan oo aan rasmi ahayn oo mushahar hoose ah mar labaad shaqo la’aan isla markaana aan lahayn wax dakhli ah oo ay ku taageeraan naftooda ama qoysaskooda.
Zulkifli oo ah timo jare ka shaqeeya goob yar oo saloon ah oo aan lahayn mushahar cayiman ayaa yidhi “hadii dukaanku xidhan yahay … macaamiil ma jiraan, wax mushahar ahna ma helo”.
“Tani waa waxa kaliya ee aan aqaan sida loo sameeyo, kama shaqeyn karo meelaha kale,” ayuu raaciyay.
Saloon Zulkifli wuxuu ka shaqeeyaa waa mid ka mid ah ganacsiyada badan ee ku yaal magaalada Jakarta oo lagu qasbay inay albaabada u laabtaan markale.
Mas’uuliyiintu waxay ballan qaadeen gargaar si loo caawiyo kuwa u baahan, laakiin Zulkifli wuxuu sheegay inuu seegay wax taageero ah intii lagu jiray wareegii ugu dambeeyay ee xayiraadaha.
“Waan ogahay inaan ubaahanahay inaan wax ka qabano aafada. Laakiin sidoo kale waxaan ubaahanahay lacag caruurtayda. Waxaan ubaahanahay cunno, waa inaan bixinaa qarashkeena … dakhligaygiina wuu dhamaaday,” ayuu yidhi.
Ku soo noqoshada qabuuraha Pondok Rangon, Adang iyo asxaabtiisi waxay sii wadaan qodida xabaalaha iyadoo ay soo gaareen dambiilo badan oo ku duuban caag fayoow.
“Waxaan qabaa walaac iyo cabsi aan ka qabo qabashada shaqadan,” ayuu yiri Adang. “Waa inaan kaliya aaminaa ilaahay – waxaan iskudayaa inaanan culeys ka saarin maskaxdayda. Waa inaan iskala socono oo kaliya.”